I-USDWTI yooVimba-Funda ukuRhweba
I-oyile ekrwada: I-WTI irejista ukuBhoboza okuKhawulezayo okuRhola amaNqanaba angama-30 kwiThemba loRhwebo
Ukuhlaziywa: 18 May 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-ngoMeyi 18
I-WTI ithengisa kwinqanaba le-30.98 yeedola ngexesha lokubhalwa, isukile kwi- $ 29.59bbls ephantsi yaya kwi- $ 31.22bbls ephezulu. Ixabiso lale veki lombhobho weoyile liphezulu kwindawo evulekileyo. I-West Texas Intermediate (WTI) irekhode elona xabiso liphezulu ukusukela ngo-Matshi njengoko abahlalutyi bebona ukwanda kwesidingo sepetroli kunye nethemba lokurhweba kunye nokuthintela ukuthotywa.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 41.09, $ 36.28, $ 34.00
Amanqanaba enkxaso: $ 27.40, $ 24.50, $ 21.34
I-USDWTI yexesha elide iTrend: Ukutshintsha
I-oyile ekrwada inyuke phantse iipesenti ezi-5.00 xa ithelekiswa ne-USD ngeeyure ezingama-24 ukuza kuthi ga ngoku kwaye ikhula ngexabiso kwi- $ 30.98 ngebhare ngoMvulo, ibonisa amabango okukhula kwemfuno yeoyile. Esi sibini sinexabiso kwiseshoni yaseAsia ukuya kwiseshoni yaseYurophu, ukusuka kwinqanaba eliphantsi le- $ 29.59 ukuya kwinqanaba eliphezulu le- $ 31.22.
Esi sibini siyacelwa ukuba sifumane inkxaso kwinqanaba leedola ezingama-27.40, kwaye ukwehla ecaleni kungayijika kwinqanaba elilandelayo lenkxaso ye- $ 24.50. Esi sibini siyacelwa ukuba sifumane olona xhathiso luphambili kwinqanaba leedola ezingama-34.84, kwaye ukunyuka okuphezulu kunokutyhala kwinqanaba elilandelayo lokumelana ne- $ 36.28.
I-USDWTI yexesha elifutshane eliQhelekileyo: Bullish
Amaxabiso eoyile ye-WTI anyuke ngaphezulu kwe- $ 29.11 kwinqanaba kwangoko ngoMvulo, kodwa ngoku esondela kwezona zithintelo ziphambili kwinqanaba le- $ 34.00, ukuphucula ithemba malunga nokuncitshiswa okuzinzileyo kwamanyathelo okuvala, ukuqala kabusha uqoqosho lwase China, kunye nokubonakaliswa kokuncitshiswa konikezelo, kunyusa kakhulu amaxabiso eoyile.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iinkunzi zeenkomo zinokuwa kumzamo wokuqala kwinqanaba le- $ 34.00 yenqanaba elibalulekileyo njengoko ukuhla okunzima kweqela lemihla ngemihla kubeka ubunzima kwaye i-RSI yexesha elifutshane iyabiwa ngelixa abathengisi banokubamba umvuzo omncinci ngexesha leseshoni.
Ioyile ekrwada: Iinzame zeWTI eNtsha zangaphambili eziya phambili ukuya kwinqanaba kwi-27.40 yeeDola emva kokuGxotha iMigangatho
Ukuhlaziywa: 4 May 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-ngoMeyi 4
Ixesha langoku lokuqhubela phambili lenyuka liye kwinqanaba le-USDWTI le- $ 27.40 emva kokubhabha ngexabiso eliphantsi ngoJuni WTI, kule veki ngokutshintshwa kwendlela yokuhamba komeleza imarike ejolise kwinqanaba lotshintsho lweemfuno; efuna ukususa kancinci iingxaki zokuhamba kwezoqoqosho olukhulu.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 29.11, $ 27.40, $ 24.50
Amanqanaba enkxaso: $ 21.32, $ 18.02, $ 13.43
Amaxabiso eoyile abhalise ukubuyela kwimeko yesiqhelo. I-oyile ekrwada ye-WTI ithumele inkqubela phambili ephakathi kwimisebenzi yentengiso yangoLwesihlanu, inyuka ngaphaya kwamanqaku ayi-18.02. Echaza ntoni ipateni esezantsi ephantsi kufutshane nexabiso le- $ 10.20 yenqanaba.
Kananjalo amaxabiso ahlala ngaphaya kwenqanaba le-18.02 yeedola sijonga kwangaphambili ukuba amaxabiso aphezulu eoyile athambile. Olunye ujoliso kukulandela okulandelayo kwinqanaba le- $ 27.40. Nangona kunjalo, lungiselela umsantsa onokubakho xa kunokwenzeka ukuba ioyile ekrwada ibuyela umva phantsi kwenqanaba le- $ 18.02 ngalo lonke ixesha idibana nenkxaso.
Ngaphandle kokophula umda wexesha elifutshane othe tyaba kwinqanaba le-21.34 yeedola, i-WTI isiya ku-Epreli 9 i-avareji yokuhamba kwe-5 kunye ne-13 yokuwela ukwehla, kufutshane nenqanaba lama- $ 24.50 kwikota ekufuphi, ngaphambi kokujolisa kwinqanaba le- $ 27.40 kwinqanaba lokumelana ngokuthe tye.
Okwangoku, umgca othe tyaba wenkxaso ejikeleze inqanaba leedola ezingama-20.08 ubonakala ngathi uhambisa ujikelezo lwenqanaba lomgangatho weoyile ngaphezulu komgca oxhathisayo-wokujika-wenkxaso, ngoku malunga nenqanaba leedola ezingama-21.34. Oku kuyathethwa, kwimbono yexesha elifutshane, amanqaku angama- $ 24.50 ahlala kwi-radar, ukwehla kwemfuno esebenzayo kunye nevolumu ishiya enye into ijonge ezantsi.
Ioyile ekrwada: Ukuhlala kweWTI kuthotyelwe phantsi njengeebhere ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwiidola ezili-13 kwiOversupply
Ukuhlaziywa: 27 April 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-Epreli 27
Amaxabiso eoyile aqale ngenqaku elimuncu kwiveki ephelileyo ka-Epreli, ehla ngaphezulu kweepesenti ze-8 ngexesha leseshoni yangoMvulo malunga noloyiko olongezelelekileyo lokunikezela. Umgqomo webenchmark yaseNyakatho Melika, West Texas Intermediate (WTI), uphulukana nexabiso kufutshane ne-14.50 yeedola, ephawula ukwehla kweepesenti ezingama-8.85 ngosuku.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 21.34, $ 20.08, $ 18.52
Amanqanaba enkxaso: $ 13.43, $ 10.20, $ 6.45
Umndilili ohambahambayo we-5 kunye nokuhamba ngokuhamba kweentsuku ezininzi, malunga ne- $ 18.52 kunye ne- $ 20.08 yamanqanaba ngaxeshanye, bathambekele ekuthinteleni imeko enokubakho kumgangatho weoyile. Ngelixa inqanaba le- $ 10.20 lihlala kuluhlu lokubukela lweebhere ngalo lonke ixesha lokuwa kwexabiso.
Emva kokubonisa iintsuku ezintathu zilandelelana ukubuyela umva, ikamva likaJuni le-WTI lehla ngepesenti ezisi-8 ukuya kwinqanaba leedola ezili-14.50 ngaphambi kokuqhubeka kuvulwe ngoMvulo waseYurophu. Abavelisi bayakuvala okwethutyana unikezelo ukulinganisa ukunqongophala kwemfuno enokubangela ukungazinzi ngakumbi kwintengiso njengoko amaxabiso etshintshela kwicala eliphantsi ngaphambi kokuba unikezelo lilingane nemfuno.
Intshukumo yexabiso le-WTI ngoku ithengisa kwinqanaba le-14.50 yeedola ngaphaya kwesiphelo sexesha elisondeleyo kwinqanaba kuluhlu lweedola ezili-13.43. Ngenqanaba eliphezulu lokuchasana eliboniswe kwi-18.52 yeedola kwikota ekufuphi, abahlalutyi balindele ukuba amaxabiso athengise ngaphakathi kolo luhlu.
Kwicala elingaphezulu, ikhefu elingaphaya kwe- $ 18.52 yenqanaba liya kubona amaxabiso eoyile ecela umngeni kwinqanaba leengqondo le- $ 20.08. Amaxabiso kunokwenzeka ukuba ahlale ethotyelwe kwixesha elifutshane kunye noxinzelelo lokuthengisa ngoxinzelelo, ngakumbi ukukhathazeka ngokugcina ngoku.
Ixabiso leoyile ekrwada: I-WTI Dives kwimo yokuSimahla yokuwa kwamaShumi amabini eminyaka phantsi kweNqanaba le-15
Ukuhlaziywa: 20 April 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-Epreli 20
Ioyile ye-WTI yehle ekuqaleni kweemarike zeveki iwela ngaphantsi kwe- $ 15 / bbl njengoko umhlaba wawukhula uphuma kugcino kwaye izitokhwe ezingafunekiyo zaqala ukuqokelelana ngenxa yokuvalwa kwe-coronavirus kuninzi lwezoqoqosho lwehlabathi. I-Crude isenokuba yeyona nto iphambili ekwehleni kwemfuno yehlabathi kunye neemeko zentengiso eziya zisiba mandundu yimfazwe yamaxabiso eSaudi Arabia neRussia.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 21.50, $ 20.08, $ 17.00
Amanqanaba enkxaso: $ 13.00, $ 10.00 $ 8.00
Nanga amanye amanqanaba enkxaso kunye nokuchasana ngokwamanqanaba amaxabiso obuchwephesha asekwe kwixesha eliphakathi ukuya kwelide (iinyanga ezi-4 ukuya kwezi-7). Ngaphandle kokuba ixabiso liwele phantsi kwe- $ 13- $ 10 (enokwenzeka), uluhlu oluphezulu luya kuba phakathi kwe- $ 21.50 kunye ne- $ 23.16 yamanqanaba.
Ngaphandle kokuba ixabiso lihle liye kwi- $ 10 nangaphantsi, imeko enokwenzeka, ixabiso kwinqanaba elisondeleyo mhlawumbi li- $ 15 ukuya kuma- $ 17 amanqanaba. Eyona nto iphambili kukuba amaxabiso eoyile ngokungathandabuzekiyo athengiswa ngaphezulu kwinqanaba langoku, nangona kunjalo, ngenxa yezithintelo, ixabiso lisenokuhlala lihla.
Ukurhweba ngeoyile kwitshathi yeeyure ezi-4 phantsi kwe-5 kunye ne-13 yemilinganiselo yokuhamba-uphawu lwe-bearish. Inkxaso yokuqala ibonwa kwinqanaba eliphantsi kwi- $ 13. Edlulileyo kule ndawo, inika inkxaso emva kwenani elijikelezileyo kwinqanaba leedola ezili-10. Ukuchasana kubonwa kwi- $ 17.00 (kufutshane phezulu) ngaphambi kokufikelela kumanqanaba angama- $ 20.08 (5 & 13 MA crossings) kunye ne- $ 21.50 (14 Epreli) inqanaba.
Amaxabiso e-WTI ahlala ngandlel phantsi koxinzelelo. Ukunyuka okuqhubekayo kwevolumu yokurhweba kunye nobungakanani ngaphandle kokutshintsha kwexabiso elibi kuvula indlela yomzuzu wokuphinda uqinisekise ukwehla, ngenqaku le- $ 10.00 ngomgqomo oguqukayo njengenkxaso ephambili elandelayo.
Ukuhlaziywa: 13 April 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-Epreli 13
Ngaphandle kwelahleko enkulu, i-WTI yamkela ngokungathandabuzekiyo isivumelwano se-OPEC +, njengoko intengiso iyayithelekisa noqikelelo lokuqala lwezigidi ezingama-20 ngemini yokusika njengoko ukubuyiswa okutsha kubonakala ngathi akunako ukugcina amaxabiso angaphaya kwe- $ 25.00 yenqanaba. Nangona kulindeleke ukuba kubuyiswe kwakhona, ukunqongophala kweziganeko zekhalenda yezoqoqosho kunganciphisa ukungazinzi kwexabiso.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 28.22, $ 27.40, $ 25.00
Amanqanaba enkxaso: $ 21.50, $ 20.08, $ 17.00
Ukusuka kwitshathi yemihla ngemihla, i-USDWTI yenqabile ukuvavanya ukubekwa kwemali phantsi kwenqanaba eliphantsi leseshoni yokugqibela ejikeleze i-22.07 yeedola, kwixesha eliphakathi ukuya kwixesha elide, malunga nokujonga amaxabiso eoyile anokuhlala kwinqanaba lawo langoku.
Nangona kunjalo, i-USDWTI kufuneka iphindaphindeke kwaye ityhale ngaphezulu kwama-25.00 aphezulu kwinqanaba lokuqala kwaye iqhubeke nokugqobhoza uphawu lwe- $ 27.40, ishenxisa ixesha eliphakathi ukuya kwelide.
Iirhafu zeoyile zihle zaya ezantsi kwi-flipside, kodwa isenzo sentengiso siphela ngemini sasisezantsi nje ngeepesenti ezingama-0.28. Isantya esiphezulu sokuthengisa sixhasa enye inzame yokuqhekeka ngezantsi.
Liqhube ixabiso lamafutha ezantsi. Ukongezwa okongeziweyo kunokubona kuvavanyo lwenqanaba le- $ 21.50. Kodwa ukuseta kwangoku kunokuphakamisa ukubuyela umva okunokwenzeka, ukuba nje inqanaba le- $ 21.50 lihleli likhona.
Ioyile ekrwada: Iinkunzi zeWTI zithathe iBreather ejikeleze isithintelo kwinqanaba elikwi- $ 28.22
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-Epreli 9
I-WTI izama ukudibanisa ukunyuka kwinqanaba elitsha le-28.22 leentsuku ezimbini eziphakamileyo, njengoko iinkunzi zeenkomo zithatha ukuphefumla kubuyiselo lwamva nje kufutshane nophawu lwe- $ 25.00. Ngexesha leendaba, ioyile yaseMelika ithengisa nge- $ 27.04, nangoku ukuza kuthi ga ngoku. Iindaba ngoLwesine zokuba iRussia izimisele ukusika i-1.6 yezigidi zemigqomo ngemini evuselele ithemba, ityhala i-WTI ukuya kuthi ga kwinqanaba le-28.22 ngeepesenti ezintlanu.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 36.28, $ 33.60, $ 30.21
Amanqanaba enkxaso: $ 25.00, $ 23.16, $ 21.50
I-WTI ithengisa ngaphezulu kwinqanaba le-27.04 leedola, yehle isuka kwiseshoni ye- $ 28.22 ephezulu ukuya kuthi ga kwinqanaba le-25.00 ukuya kuthi xhaxhe kancinci. I-oyile ixabiso layo lizinzile ngaphaya kwama-30 Matshi ukuya phezulu.
Ukuxhathisa kwayo kokuqala kunokubonwa kumanqanaba angama- $ 28.22 ukuya kuthi ga kwi-29.10 yeedola (kwinqanaba eliphezulu le-3 ka-Epreli) kunye nenqanaba leengqondo le- $ 30.21. Kwicala elisezantsi, inkxaso ibonwa kwinqanaba le-25.00 yeedola (umgca wendlela) ngaphambi kokuba yehle ibe yi- $ 23.16 (nge-7 ka-Epreli).
Kumqondiso onokubakho wokutshintsha umva okuhle, i-USDWTI ithanda ukwenza intloko eguqulweyo kunye nemilo yamagxa kwixesha leeyure ezine. Ixabiso lisilele ukugqwesa kwinqanaba lawo lakutshanje le- $ 28.22 yenqanaba kukonyuka okuqhubekayo kunye nokubuyela umva emazantsi ukudala ingalo yasekunene.
Ukubuyiselwa okubalulekileyo ngaphaya kwenqanaba le- $ 29.11, apho kuhlala khona intambo yentsingiselo, kunokubonisa ukuqala kokuphakama, kubahwebi kusenokwenzeka ukuba bandise ukufikelela kwizithintelo ezingaphezulu ezithe tyaba kwindawo yokumelana ne- $ 30.21.
Ioyile ekrwada: IWTI iyehla emva kokubetha kwinqanaba le- $ 29.11, i-OPEC + yeNtlanganiso kaxakeka ihlehlisiwe
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-Epreli 6
I-West Texas Intermediate (WTI) yeoyile enexabiso elibomvu ngoMvulo emva kokubetha inqanaba le- $ 29.11 njengoko iseshoni engxamisekileyo ye-OPEC + ilibazisekile. Ukulahla kunokunxulumana neSaudi Arabia kunye nesigqibo seRussia sokulibazisa iseshoni engxamisekileyo ecwangcisiweyo kude kube nguLwesine ukuze bathethathethane ngokusikwa kwemveliso.
I-USDWTI isuse ngaphezulu kweepesenti ezili-10 kwixabiso lokuvala ngolwesiHlanu kwaye yabetha kwinqanaba eliphantsi leedola ezingama-26.46 mihla le kwiiseshoni zokuqala zaseMelika zorhwebo, kodwa ukusukela oko yaphinda yalahleka. I-downtrend ingaqala ukuba inqanaba leedola ezingama-25 liphuliwe kwaye ukuhla kwenqanaba lokuxhasa le- $ 23.16 kuyalandela.
Ngokuchasene noko, ukuba isibini sibuyela umva kwinqanaba elidlulileyo le- $ 27.40, eya kulandelwa kwinqanaba lokumelana ne- $ 29.11, i-uptrend inokulindeleka ukuba iqhubeke.
Ioyile ye-WTI ifumene amandla ngaphezulu kwenqanaba le- $ 27.40 kwinqanaba leyure ezi-4 kwaye yenyuka ngaphezulu kwamanqaku angama- $ 28 kurhwebo lwaseYurophu ngoMvulo, kulandela ukuvulwa kwezithuba ezisezantsi eAsia. Inkqubela phambili entsha iyafuneka ukuze ugcwalise umsantsa wanamhlanje ukuvelisa umqondiso wokunyusa inqanaba lokuhlaselwa ngenkani kweedola ezingama-29.11.
Ukophula umthetho kuya kubonisa umqobo obalulekileyo kwi-30.21 yeedola (ezantsi iipesenti ezingama-38.2 zeedola ezingama-48.64) kunye nenkxaso eyomeleleyo kwinqanaba leedola ezingama-25.00 kulindeleke ukuba zilungelelanise iinkunzi zeenkomo ngelixa zibambe le nkxaso.
Ixabiso lokungena: $ 29.11
Yeka: $ 30.21
Ithagethi: $ 25.00
Ioyile ekrwada: Ixabiso lamafutha e-WTI liphinda libuye kunye neBullish Bias ngaphaya kwe-22.00 yeNqanaba kwi-Global Optimism
Ukuhlaziywa: 2 April 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-Epreli 2
Ixabiso leoyile le-WTI libuyisa phantse iipesenti ezili-10 ngolwe-Lwesine phakathi kokuphuculwa kwethemba lokuzithemba kunye nokuzuza okubanzi kunye nokukhetha okungaphaya kwenqanaba lama- $ 22.00. Ithemba elitsha phakathi kwabarhwebi lisusela kwimizamo kaMongameli uTrump yokukhuthaza iRussia ne-Saudi Arabia ukuba babambe izivumelwano kwaye bavale imbambano yamaxabiso.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 30.21, $ 25.00, $ 23.16
Iimpawu zokuqala zokufumana kwakhona kwitshathi yemihla ngemihla zibandakanya ikhefu kunye nokusondela ngaphaya kokuncipha komndilili wokuhamba we-5 kwinqanaba leedola (i-22.47 yeedola) okwangoku ephantsi kokuchasana nokucebisa ukuqhubela phambili kokuphindisela kwimingcele elandelayo ethe tye kwi- $ 25.00 (ukuncipha kwenqanaba lokuhamba eli-13) kunye nenqanaba leedola ezingama-30.21 (kwengqondo) .
Inkangeleko iyonke ihlala iqinile kwaye ifuna umonde, ngakumbi ukuba amanyathelo okubuyisa asilela ukucoca indawo ye-pivot kwi-13 yomndilili wokuhamba.
Amaxabiso eoyile arhweba ngokuthe ngcembe ngamaxabiso anyuka kancinci, malunga ne-1.50 yepesenti yangaphakathi. Ixabiso lihlala lingaphantsi kwenqaku le-23.16 yeedola nangona, ebonisa ukuba kusekho ukubakho kwecala elisezantsi. Umsebenzi wexabiso okwangoku ubanjiwe kwi- $ 22.53 nakwi- $ 20.08 yenqanaba lendawo.
Umntu unokulindela ukuphuma kula manqanaba. Isalathiso samandla esihambelanayo sibhekisa kwimeko enokuthengwa kwangoko enokuthi abathengi bathengwe ngebhidi yokuvula iingcango zomsebenzi we-bearish.
Ixabiso lokungena: $ 21.50
Yeka: $ 20.08
Ithagethi: $ 23.16
I-oyile ekrwada: I-WTI ithwala ixabiso elikwi- $ 20 yenqanaba
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDWTI-Matshi 30
Kwiseshoni yokuqala yangoMvulo, i-WTI ityibilika iye kwixabiso lama- $ 19.95. Ngokwenza njalo, isalathiso samandla sihlala siphantse sibuthathaka kangangeminyaka emininzi ngelixa ukuthumela ukuhla okwesihlandlo sesine ngokuthe ngqo ukusukela kwimpelaveki kwaye ngoku kujonge ukugqiba inyanga kaMatshi ngaphezulu kwama-50 epesenti. Ngaphandle kwesimo esibuhlungu sentengiso, ukunqongophala kokuzibophelela kwinxalenye yamazwe avelisa ioyile ukutshintsha imveliso kwenza ukuba i-oyile ingazami ukubuya.
Amanqanaba enkxaso: $ 17.00, $ 15.00, $ 10.00
Amaxabiso eoyile ngokuthe chu ancipha ukutyibilika ezantsi nje kwenqanaba lama- $ 20.08 kwindawo yenkxaso. Oko kubonisa umzamo wokugqibela wesibini wokujikeleza eli nqanaba. Amaxabiso athabatha kancinci ukuza kuthi ga ngoku. Nangona kunjalo, kwitshathi yemihla ngemihla, isenzo sexabiso se-bearish sibonisa ukuba kukho indawo yokuhla okungaphezulu.
Kodwa ezantsi-ezantsi mihla le ngalo mzuzu zibonisa ukuba kunokwenzeka ukuba kubekho isaphulelo. Okwangoku, ixabiso elikufutshane ne- $ 27.40 yenqanaba kunokuba yinto ekujolise kuyo ngokucacileyo. Ngokuchasene noko, inqanaba eliphantsi le- $ 17.00 linokuba yinjongo elandelayo okoko indawo yenkxaso ye- $ 20 ayinakho ukuyibamba.
Kwisakhelo sethutyana elifutshane, ilahleko yenqanaba le-20.08 yengqondo inokubangela ukuthengisa okuhlaziyiweyo kunye nenkxaso engafunekiyo kwinqanaba le-17.00 (eliphantsi) ngokuqhubeka kwinqanaba elilandelayo, eli kwinqanaba le-10 leengqondo, elingagunyaziswanga.
Kwelinye icala, ukonyuka okuphezulu komgca wokuqala wokuchasana, kwinqanaba lama- $ 23.16, kunokufikelela kwi- $ 27.40 nakwi- $ 30.21 kumanqanaba ngexesha langaphambili. Iinkunzi zenkomo akunakulindeleka ukuba zikholelwe, nangona kunjalo, ukuba zibonelela ngokudubula okungaguqukiyo ngaphezulu ngaphezulu kwe-11 Matshi ngeenxa zonke kwinqanaba leedola ezingama-36.28.
Ixabiso lokungena: $ 20.84
Yeka: $ 21.50
Ithagethi: $ 19.50